13 / 09 / 2018 | RayHaber | raillynews
Maalinta: Sebtember 13, 2018
3. Iibinta Gaadiidka Dadweynaha Garoomada waa la joojiyay
Maalmaha furitaanka ee Istanbul 3. Gegada Diyaaradaha si looga sameeyo Gaadiidka Dadweynaha ayaa loo furay 'Gaadiidka Raaxada ah ee Lugta leh' qandaraaska ayaa la bartay. Marxaladda koowaad ee 29 waxaa loo qorsheeyay in la furo Oktoobar. [More ...]
UITP 8. Shirka lagu qaban doono Bursa, Turkey
Turkey UITP Shirka, "Gaadiidka Dadweynaha ee Technology Information oo Digitization" la theme ah, Bursa degmada Metropolitan iyo marti BURULAŞ 2 October, waxaa la qaban doonaa in Bursa. Sanadkan Turkey xnumx'inci Shirka UITP kaas oo ka dhici doona; Turkiga [More ...]
Maalinta Koowaad ee Dugsiyada ee Gaadiidka Dadweynaha ee Adana iyo Waalidiinta
Dowladda Hoose ee Magaalada Adana, ayaa iskuulada la furi doonaa maalinta ugu horeysa si loo yareeyo xooga taraafikada magaalada ee ardayda iyo waalidiinta ayaa bixin doonta adeegga gaadiidka dadweynaha oo bilaash ah. Ku dhowaad 500 kun oo arday ayaa bilaabi doona bilowga koorsada 17 Sebtember [More ...]
Maalinta Koowaad ee Dugsiyada ee Samsun Gaadiidka Gaadiidka Macalimiinta iyo Ardayda
Duqa magaalada Samsun Zihni Sahin 2018-2019 wuxuu bilaabi doonaa sanad dugsiyeedka 17 bisha Sebtember iyadoo ardayda gaadiidka Samulaş iyo macallimiinta aan la soo dallici doonin, ayuu yidhi. Duqa Magaalada Samsun Magaalo Weyn Zihni Sahin uu [More ...]
Tijaabinta Mashruuca Tuzla-Çayırova Wadada Xiriirka
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay ka fulineysaa mashaariic kaladuwan gaadiid raaxo leh oo aan kala go 'lahayn oo magaalada dhexdeeda ah. Gobollada waxaa go'aamiya Waaxda Gaadiidka waxaana loo shaqeeyaa si loo fududeeyo qulqulka taraafikada. Macnaha guud, oo leh Çayırova [More ...]
25 kiiloo mitir ugu weyn ee 3 ee u dhexeeya Varsak iyo Zerdalilik, waa mashruuca ugu weyn Antalya ee leh ilaha bulshada. Qadka Nidaamka Tareenka Marxaladdu wuxuu shaqeeyaa si buuxda. Mashruuca halkaas oo shaqooyinka qashin-qodista lagu dhammeeyo, wax-soo-saarka biyo-mareennada ayaa la sameeyaa. [More ...]
Tareenka Caalamiga ah ee Eurasia Railway, Nidaamka Tareenka Fudud, Kaabayaasha iyo Saadka Saanadda 10-12 waxay isu diyaarineysaa inay martigeliso magacyada hoggaanka waaxda tareenka adduunka ee Izmir markay tahay Abril 2019. Mid ka mid ah gobolka Eurasia iyo adduunka ugu badan [More ...]
Konak ayaa isdhaafsaday taraam, Karşıyaka iyo tirada rakaabka raacaya dekedaha Bostanlı ayaa kordhay boqolkiiba 22 ilaa 1 milyan 84 kun bishii Agoosto. Qiyaastii mashruuca taraafikada 450 milyan ginni [More ...]
Faransiiska waxay Tijaabineysaa Tareenada Tareenada
SNCF, hay'adda dowladu leedahay ee wadooyinka tareenka ayaa ku dhawaaqay in tareenka nooca iskiis u dhaca ah la soo saari doono ilaa shan sano. Sida laga soo xigtay Shirkadda Waddooyinka ee Waddanka Faransiiska SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer Français), [More ...]
Çorlu wuxuu mas'uul ka yahay shil tareen 'jidad badan, faa'iido badan'
Guddoomiyaha degmada CHP Uzunköprü Özlem Becan, Çorlu wuxuu dhacay ka dib shilkii tareenka ee lagu dilay muwaadiniinteena 25 Axadii la soo dhaafay, magaca xaflada ayaa la sameeyay fahanka kadib. Guddoomiyaha Degmadda CHP Uzunköprü [More ...]
Guddoomiye Ku-xigeenka Fikrado, TULOMSAS Farsamooyinka Gawaarida La Baaray
Guddoomiyaha gobolka Eskişehir Özdemir Çakacak wuxuu booqday Agaasime guud ee TÜLOMSAŞ wuxuuna ka helay warbixin ku saabsan maareeyaha guud Hayri Avcı howlaha ku saabsan. Guddoomiyaha gobolka Çakacak wuxuu booqday aagga wax soo saarka warshada wuxuuna la hadlay shaqaalaha. [More ...]
Inta badan Taageerada Muhiimka ah ee Burulaş
Canan AYKANAT, oo sidoo kale ah guddoomiyaha ururka haweenka naafada ah (ENKADER), oo ka shaqeeya cusbitaal gaar loo leeyahay, ayaa sheegay in uu Bursaray u isticmaalay gaadiidka subax kasta iyo fiidkii. [More ...]
Dayactir aan la sii wadi karin ee Pınarbaşı Aytepe Cable Line
Pınarbaşı-Aytepe Cableway Line, oo ay dhistay Dawladda Hoose ee Aydın ee 2009 iyadoo ku bixineysa qiyaastii 3 milyan oo rodol oo hadda gacanta ku haysa degmada Aydın Metropolitan District, looma isticmaali karo dayactir aan dhamaad lahayn oo bilo la aan awgeed. Xaalad cakiran [More ...]
Duqa Magaalada Yucel: X 1 TL Laga Yaabo Inay Ka Dhigaan Baabuurta Cableka ee Alanyaspor iyo Alanya Soo Geli Doono
Duqa Alanya Adem Murat Yücel wuxuu booqday Natemiz Alanyaspor Club. Madaxweynaha kooxda Hasan Çavuşoğlu iyo xubnaha guddiga ayaa soo dhoweeyay Yücel. Kuxigeenka Duqa Alanya iyo waliba naadiga [More ...]
Nidaamyada Saxeexa iyo Tababarka Fursadaha Shaqada